9/11: Wiilka ugu yar carruurta Cusama Bin Laden muxuu ka yiri ‘jihaadka’ uu aabbihii ku jiray? - Bulsho News
Farmaajo oo ku dhawaaqay go'aan cirka ku sii shareeray khilaafkii...
9/11: Wiilka ugu yar carruurta Cusama Bin Laden muxuu ka yiri 'jihaadka' uu aabbihii ku jiray?
9/11: Wiilka ugu yar carruurta Cusama Bin Laden muxuu ka yiri ‘jihaadka’ uu aabbihii ku jiray?
Wiilkii ugu yaraa caruurtii uu dhalay hoggaamiyihii Al-qaacifda Osama bin Laden ayaa sheegay inuu ka yaxyaxo kana naxo falkii uu sameeyay ururka uu mar hoggaamiyaha ka ahaa aabihiis ee ka dambeeyay weerarkii 11 -kii September sanadkii 2001 -dii.
“Way igu adkayd inaan rumeysto inuu leeyahay awood uu ku abaabulo wax caynkan oo kale ah. Maalintaas waxay beddeshay nolosheena, aad bayna u adkeyd inaan sii noolaano wixii ka dambeeyay markaa ,” ayuu yiri Cumar Bin Laden oo 40 jir ah oo wareysi bixiyay toddobaadkii hore.Wuxuu sheegay inuu dareemay “ceeb iyo argagax” falalka aabihiis uu ku kacay dartood.Farshaxaniistahan oo 40 jir ah kuna nool magaalada Normandy ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inuu dadaal ugu jiro sidii uu u qaban lahaa booska aabihiis oo ah hoggaamiyaha Al Qaacida balse uusan awoodin.
Cumar bin Laden ayaa wareysi siiyay wakaaladda wararka ee AP xili uu ku sugnaa magaalada Qaahira ee dalka Masar, wuxuuna shaaca ka qaaday in qaar badan oo ka mid ah carruurtii aabbihiis la joogay Afgaanistaan ay u baxsadeen Iiraan ka dib duulaankii Maraykanku hoggaaminayey sanadkii 2001, welina ay ku wada jiraan xayndaab ay ilaaliso Iiraan.
Wuxuu sheegay in falalka Al-qaacidda sameysay ay nolashiisa saameyeen.
Cumar Bin Laden ayaa wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu helo fursad uu ku booqdo Israa’iil iyo Mareykanka.Wuxuu yiri:”Waan ogahay inay yihiin waddamo qurux badan, dad badan oo ku noolna waxay rabaan inay nabadda kala shaqeyaanFalastiiniyiinta,” .Cumar bin Laden wuxuu sheegay in loo soo bandhigay fursado uu casharro ku saabsan nabadda kaga bixiyo jaamacadaha dalalkaas uu kor ku soo sheegay.
“Waa dal quruxsan, dad badanna waxay doonayaan inay nabad la yeeshaan Falastiiniyiinta”, ayuu yiri isagoo ka hadlyay Israa;iliyiinta.
Omar bin Laden hooyadii ayaa ka soo jeeda yuhuud, waxaana laga dalbaday marar badan inuu khudbada ku saabsan nabadda ka jeediya jaamacada ku yaalla Israa’iil, sida uu ku sheegay wareysiga.
Afhayeenka ururka Taalibaan oo shir jaraa’id ku sheegay...
Daalibaan oo goob fagaare kusoo bandhigay meydadka afar...